2 Makoronike 35 | Bhaibheri repaIndaneti | Shanduro Yenyika Itsva
Bhuku Rechipiri reMakoronike 35:1-27
Josiya anoronga nezvePaseka huru (1-19)
Josiya anourayiwa naFarao Neko (20-27)
35 Josiya akaitira Jehovha Paseka+ muJerusarema, uye vakauraya chibayiro chePaseka+ pazuva rechi14 remwedzi wekutanga.+ 2 Akapa vapristi mabasa avo uye akavakurudzira kuita basa ravo repaimba yaJehovha.+ 3 Akabva ati kuvaRevhi, avo vaiva varayiridzi vevaIsraeri vese,+ vari vatsvene vaJehovha: “Pinzai Areka tsvene muimba yakavakwa naSoromoni mwanakomana waDhavhidhi mambo weIsraeri;+ hamuchafaniri kuitakura pamapfudzi enyu.+ Zvino shumirai Jehovha Mwari wenyu uye vanhu vake vaIsraeri. 4 Gadzirirai maererano nedzimba dzemadzibaba enyu mumapoka enyu, muchitevera zvakanyorwa naMambo Dhavhidhi+ weIsraeri uye nemwanakomana wake Soromoni.+ 5 Mirai munzvimbo tsvene muri mumapoka edzimba dzemadzibaba ehama dzenyu, ivo vanhu vese,* boka rimwe nerimwe riine boka raro reimba yemadzibaba evaRevhi. 6 Urayai chibayiro chePaseka,+ muzvitsvenese, uye mugadzirire muchiitira hama dzenyu kuti shoko raJehovha rakapiwa pachishandiswa Mozisi riitwe.” 7 Josiya akapa vanhu vese vaivapo zvipfuwo zvaiti, makwayana makono nembudzi diki hono zvaisvika 30 000 nemombe 3 000 kuti zvive zvibayiro zvePaseka. Izvi zvakabva pazvinhu zvamambo.+ 8 Machinda ake anewo zvaakapa kuti zvive mupiro wekungopawo nekuzvidira wevanhu nevapristi nevaRevhi. Hirikiya,+ Zekariya naJehieri, vatungamiriri veimba yaMwari wechokwadi, vakapa vapristi zvibayiro zvePaseka 2 600 nemombe 300. 9 Konaniya nehama dzake Shemaya naNetaneri, pamwe chete naHashabhiya, Jeyieri, naJozabhadhi, vakuru vevaRevhi, vakapa vaRevhi zvibayiro zvePaseka 5 000 nemombe 500. 10 Basa racho rakagadzirirwa, uye vapristi vakamira panzvimbo dzavo, nevaRevhi mumapoka avo,+ sezvakanga zvarayirwa namambo. 11 Vakauraya zvibayiro zvePaseka,+ uye vapristi vakasasa ropa ravakagamuchira kwavari,+ vaRevhi vacho pavakanga vachivhiya mhuka dzacho.+ 12 Vakabva vagadzirira zvibayiro zvinopiswa kuti zvigoverwe kune vamwe vanhu vese, avo vainge vakaiswa mumapoka edzimba dzemadzibaba, kuti zvipiwe kuna Jehovha sezvakanyorwa mubhuku raMozisi; uye vakaitawo saizvozvo nemombe dzacho. 13 Vakabika* chibayiro chePaseka pamoto maererano netsika yacho;+ uye vakabikira mipiro mitsvene muhari, mumakate, nemumapani. Vakabva vakurumidza kuuya nacho kune vamwe vanhu vese. 14 Vakabva vagadzira chibayiro chavo nechevapristi, nekuti vapristi, ivo vazukuru vaAroni, vakanga vachipa zvibayiro zvinopiswa nemafuta kusvikira usiku, saka vaRevhi vakagadzira chavo nechevapristi, ivo vazukuru vaAroni. 15 Uye vaimbi, ivo vanakomana vaAsafi,+ vaiva panzvimbo dzavo sezvakarayirwa naDhavhidhi,+ Asafi,+ Hemani, naJedhutuni+ muoni wamambo; uye varindi vepamagedhi vaiva pamagedhi akasiyana-siyana.+ Pakanga pasina chikonzero chekuti vabve pabasa ravo, nekuti hama dzavo vaRevhi dzakavagadzirirawo chibayiro chavo. 16 Saka basa rese raJehovha rakagadzirirwa pazuva iroro kuti vachengete Paseka+ nekupa zvibayiro zvinopiswa paatari yaJehovha, sezvakarayirwa naMambo Josiya.+ 17 VaIsraeri vaiva ipapo vakachengeta Paseka panguva iyoyo uye Mutambo Wechingwa Chisina Mbiriso kwemazuva 7.+ 18 Kwakanga kusati kwamboitwa Paseka yakaita saiyoyo muIsraeri kubvira mumazuva emuprofita Samueri; uye hakuna mumwe mambo weIsraeri akanga amboita Paseka yakafanana neyakaitwa naJosiya+ nevapristi, nevaRevhi, nevaJudha vese nevaIsraeri vaiva ipapo, nevagari vemuJerusarema. 19 Paseka iyi yakaitwa mugore rechi18 rekutonga kwaJosiya. 20 Zvese izvi zvapera, Josiya paakanga agadzira temberi,* Mambo Neko+ weIjipiti akauya kuzorwa kuKakemishi pedyo neRwizi rwaYufratesi. Josiya akabva aenda kunorwisana naye.+ 21 Saka akatuma nhume kwaari, achiti: “Izvi zvinei newe, haiwa iwe mambo weJudha? Nhasi handina kuuya kuzorwa newe, asi kuzorwa neimwe imba uye Mwari ati ndikurumidze. Kuti zvikunakire, rega kupikisana naMwari uyo aneni, nekuti angakuparadza.” 22 Zvisinei, Josiya haana kubva kwaari, asi akaita kuti vanhu varege kumuziva+ kuti arwe naye, uye haana kuteerera mashoko aNeko, ayo aibva mumuromo maMwari. Saka akaenda kunorwa muBani reMegidho.+ 23 Zvino vaipfura neuta vakapfura Mambo Josiya, uye mambo akati kuvaranda vake: “Ndibvisei pano, nekuti ndakuvadzwa zvakaipisisa.” 24 Saka varanda vake vakamuburutsa mungoro, vakamukwidza mungoro yake yehondo yechipiri, vakaenda naye kuJerusarema. Saka akafa akavigwa muguva remadzitateguru ake,+ uye vanhu vese veJudha nevemuJerusarema vakachema Josiya. 25 Jeremiya+ akaimbira Josiya, uye nanhasi vaimbi vese vechirume nevechikadzi+ vachiri kuimba nezvaJosiya munziyo dzavo dzekuchema; uye pakasarudzwa kuti dziimbwe muIsraeri, uye dzakanyorwa panziyo dzekuchema. 26 Kana iri nhoroondo yese yaJosiya nemabasa ake erudo rusingachinji achitevedzera zvakanyorwa muMutemo waJehovha, 27 uye zvaakaita, kubva kwekutanga kusvika kwekupedzisira, zvakanyorwa muBhuku reMadzimambo eIsraeri neeJudha.+
^ ChiHeb., “ivo vanakomana vevanhu.”
^ Dzimwe shanduro dzinoti, “Vakagocha.”
^ ChiHeb., “imba.”
2 Makoronike 35